Yakanakisa Inventory Management Software
Bhizinesi rako harigone kurarama pasina hesera. Asi mabhizimusi mazhinji kunze uko haana anoshanda ekutsvaga maitiro ekugadzirisa.
Kuwedzeredza mari kunogona kudzikisira kuyerera kwemari apa under underinging kunogona kukonzera kubuda kana kurasikirwa kwemari.
Mazuva ekushandisa spreadsheet kana penzura uye pepa nzira yekutevera kuwanza takagara kumashure kwedu. Inventory maneja software yave kuwanikwa kune mabhizinesi emhando dzese nemasaizi.
Zvimiro zvakaita sekuraira kwekuraira, kuzivikanwa kwechigadzirwa, manejimendi ebasa, uye kutengeswa kwemidziyo zvinhu zvese zvinozivikanwa pashanduro yekutarisira software.
Kana bhizinesi rako richitsvaga nzira yemazuva ano yekutevera zviumbwa, wasvika panzvimbo chaipo.
Iyo 8 Best Inventory Management Software ye2020
Kune mazana ezvinyorwa zvakasiyana zvekugadzirisa mhinduro pamusika nhasi. Kutsvaga yakanakisa bhizinesi rako rinogona kunzwa sebasa rinotyisa.
Nerombo rakanaka iwe, ndatoita zvese zvekutsvaga. Heano pamusoro masere zvisarudziro manejimendi maneji mhinduro kuti iwe kufunga:
Patiri kuenderera mberi negwara iri, ini ndinokupa iyo-yakadzama kuongorora yega yega pazasi. Iwe uchazodzidza nezve zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, mabhenefiti, uye mutengo unobatanidzwa nezvipindiriso izvi.
Yakanakisa Inventory Management Software Ongororo
Cin7 iri gore-rakavakirwa rekutsvaga dhizaini system. Iyo software inoitwa yekukwiridzira stock kana ichideredza marara.
Iwe unozobatsirwa nekuchinjika kudzora uye azere kuoneka yako hesate. Iyo software inoenderana neyakasiyana nzira dzekutengesa zvichienderana nerudzi rwebhizinesi rauinarwo. Iwe unozogona kuchengeta yakakwana huwandu hwechitoro kuti uwane kudikanwa.
Cin7 ine zvishandiso zvekurongedza kuronga uye kutevedza mutengo wekuita. Izvi zviwanikwa zvinopfuura pamusoro pekubhadharisa mutengo wevhareji yekuverengera kukosha.
Kutsvaga uye kudzora maitiro anosanganisira:
FIFO uye serial yekutevera
Chimwe chinhu stock
Akapedza zvinhu uye zvigadzirwa zvigadzirwa
Dzora maitiro ehutongi
Iwe zvakare unowana mukana wekuverenga zvinyorwa se COGS, general ledger mapa, uye mutero kubika.
Kubva padura rako kuenda kune rako nzvimbo yekutengesa (POS) system, Cin7 inokutendera kuti ugone kubata hesita kubva kunzvimbo dzakawanda nemachiteshi.
Cin7 ine matatu akasiyana mapakeji aunosarudza kubva:
Pre-Order uye backorder manejimendi
Ese Starter maficha
Auto otomatiki kupatsanura
Multiple mushandisi tsigiro
Zvese Momentum maficha
Tsika EDI kusangana
Mitengo yeCin7 yakagadzirirwa kusangana nezvinodiwa zvebhizimusi rako chairo. Iwe unogona kuronga kufona kana bhuku dhemo neCin7 timu yekutengesa kukumbira mutengo.
Samaki software ine matatu akakosha software mapepa; kugadzira, imba yekuchengetera zvinhu, uye zvinhu zvekutevera.
Mhinduro yekugadzira inokubatsira iwe kuverenga zviyero zvekudzivirira kuti usapfuure-kana kurongeka. Iwe unogona kutevedzera hesita padanho rega rega rekuvhiya, kubva pane yekutanga kuraira kusvika kune yekupedzisira kutumwa.
Mhinduro iyi zvakare yakakodzera kugadzira mirairo yebasa, kugadzirisa, uye basa rekutsiva. Iwe unozogona kuchengetedza ako mazhinji anowanzo basa maodhesiti uye mabhadhariri ezvishandiso zvekushandisa kune epamberi mabasa.
Padivi rekuchengetera rekushanda, software inokupa chaiyo-nguva yekutsvaga yekugadzirisa.
Gadza otomatiki kudzoreredza mitemo pane zvese zvigadzirwa kuti zvisaguma kupera simba. Iwe unogonesawo kubvisa zvikanganiso uchishandisa scanning barcode.
Kutsvaga zvinhu kunopa iwe kugona kutevedzera zvinhu nenhamba dzehunyanzvi, huwandu hwenhamba, mazuva ekubuda, uye zvimwe firita. Tarisa zviyero zvako zvedzimba munzvimbo dzese, uye nyangwe uchitamisa hesenzi pakati penzvimbo dzakawanda.
Fishbowl inobatanidza pamwe nezvimwe zvinogadziriswa mhinduro seSpyBook, Salesforce, Xero, Shopify, Amazon, uye WooCommerce.
Pamusoro pe software, unogona kuwana hesit management manejimendi zvakananga kubva kuFishowow futi. Ivo vane mobile scanner kits, vatengesi uye muhomwe Scanners, barcode anodhinda, uye POS Hardware.
Fishbowl software mutengo yakagadzirirwa maererano nezvido zvako. Iwe unogona kukumbira demo pamhepo uye utore kwemazuva gumi nemana kutongwa zvakare.
Ordoro ndiyo yakakomberedzwa hub yekuumbwa kwako. Iyo mhinduro yakanaka kune ecommerce mabhizinesi ane akawanda channels ekutsvaga hesheni.
Kana iwe uri kuwana zvigadzirwa kubva kune dzimba dzekuchengetedza, vatengesi, misika, uye nzvimbo dzekuzadzisa, zvese zvinogona kutarisirwa mune imwechete dashboard.
Segore-based heseri management system, unogona kutanga kushandisa Ordoro pasina kurodha pasi kana kuisa chero chinhu. Saka kusimuka nekumhanya kuri nyore. Kune avo iwe unotengesa zvigadzirwa zvakananga kune vatengi kuburikidza nekudonhedza, Ordoro ichave yepamusoro yekutevera management foramu kuti iwe ufunge nezvayo.
Kana iwe uchinge wamisa yako vese vatengesi uye zvigadzirwa, Ordoro inozongoereketa nzira yekutsvaga kune chaiyo vatengesi. Iwe unogona kuzvibata izvi mannyawo.
Ordoro inobatana ne akanakisa ecommerce mapuratifomu like:
Kana iwe uchitsvaga backend mhinduro yekuyera yako ecommerce bhizinesi, Ordoro's hesarisi management software ndeyechokwadi kwauri.
Ordoro ine chirongwa cheA Express inotanga pamadhora makumi mashanu nemashanu pamwedzi, asi izvo hazvisanganise maitiro ekutarisira maitiro. Kuti uwane izvozvo, iwe unofanirwa kukwidziridza kuPro package, inotanga pamadhora mazana mana nemashanu pamwedzi.
Kana iwe uri mutengesi wepamusoro-vhoriyamu, bvunza timu yekutengesa kuOrdoro kuti ukurukure tsika yemitengo kune bhizinesi-chikamu mhinduro. Iwe unogona kuronga demo kune chero yeizvi urongwa nhasi.
Veeqo mhinduro yemagetsi ekugadzirisa yakagadzirirwa vatengesi. Pamusoro pekutanga, software yacho inobatsira iwe kuraira uye kutumira zvakare.
Iyo software inotsigira multichannel yekutanga system ine 16+ yekutengesa nzira yekubatanidza. Iwe unokwanisa kubata mizhinji yekuchengetera dzimba, kutenga, uye vatengesi zvakare.
Yayo kurongeka manejimendi ane maitiro anobata anodzoka, akawanda mareti, uye mishumo yemari.
Veeqo inobatanidza neinopfuura makumi maviri nemaviri eakisi yekubatanidza. Iwe unogona kushandisa software kuprinda zvekutumira zvinyorwa uye kuwana mukana wekutevera parcel zvakare. Kana iwe uri kurongedza zvinhu uri wega, software yacho inopa barcode scanner kutora, bundled mavovoice, uye yekuchengetedza muhofisi yekuzivisa.
Iwe unozobatsirwa kubva kune bhizinesi-giredhi barcode scanner, zvisinei nehukuru hwechitoro chako chekushandisa.
Veeqo ine matatu makuru mapakeji aunosarudza kubva. Mitengo inoenderana nehoriyumu yekuraira inofambiswa kuburikidza ne software.
Accelerator - $ 156 - $ 374 pamwedzi
Zvigadzirwa zvisina muganho
2-11 vashandisi (zvichibva pahuwandu)
Inventory sync ine 20+ misika
21+ kutumira kusanganisa
Kukura Kwepamusoro - $ 202 - $ 639 pamwedzi
4-13 vashandisi (zvichibva pahuwandu)
Premium - $ 260 - $ 1,149 pamwedzi
5-14 vashandisi (zvichibva pahuwandu)
Yese yemiyero iri pamusoro inoenderana nechibvumirano chegore. Veeqo inopa kurongedza kwemwedzi-mwedzi pamwero wepamusoro. Iko kune zvakare chirongwa chebhizimusi ine mutengo wemitengo kune vatengesi vanotumira zvinopfuura zviuru zvemaira pamwedzi.
Pakazara, kuchinjika kwezvirongwa izvi kunotendera kuti usarudze sarudzo yakakodzera maererano nezvido zvako.
Zoho inonyanya kuzivikanwa nehuwandu hwayo hwakawanda hwebhizinesi software. Zoho Mabhuku ane nhamba yepamusoro pane yedu yeiyo akanakisa madiki bhizinesi accounting software. Takatodaidza kuti Misangano yeZoho mugwara redu pane yakanakisa yemusangano musangano.
Pamusoro peizvi zvishandiso zvezvinhu zvakaita seCRM nezvimwe, Zoho Inventory ndeimwe software yepamusoro yekufunga kubva kune uyu mupi.
Zviri nharo mhinduro iri nyore pane redu rondedzero. Mabhizinesi madiki anogona kuchengetedza yeti yega yega kushandisa Zoho Inventory stock management management.
Iwe zvakare unozogona kubata kurongeka kuzadzikiswa uye yekutanga kubva kune imwechete dashboard.
Pamusoro Zoho Inventory maficha anosanganisira:
Ini ndinoda Zoho Inventory nekuti iwe unokwanisa kubata mirairo uye nekutarisa mamiriro ekutakura uchienda neApp mobile app yavo, inowanika pane ese iOS neApple michina.
Heano ongororo yeZoho Inventory zvirongwa uye mitengo:
Mahara - $ 0
Makadhi makumi maviri epamhepo pamwedzi
Makumi maviri ekufambisa zvinyorwa pamwedzi
20 kutumira kwekutakura pamwedzi
1 imba yekuchengetera
Basic - Kutanga pamadhora makumi matatu pamwedzi
1,500 online mairairo
150 zvekutumira zvinyorwa
150 kutumira kwekutakura
Standard - Kutanga ku $ 79 pamwedzi
10,000 online mairairo
1,000 zvekutumira zvinyorwa
1,000 kutumira kwekutakura
Seri nhamba yekutevera
Nyanzvi - Kutanga ku $ 199 pamwedzi
30,000 online mairairo
3,000 zvekutumira zvinyorwa
3,000 kutumira kwekutakura
Sezvauri kuona, pane chirongwa kune wese munhu zvichibva pahukuru hwebhizimusi rako.
Kuwedzera kune zvimwe zvigadzirwa zveZoho, Zoho Inventory inobatanidza nezvakakurumbira zvishandiso seShopify, PayPal, Amazon, eBay, Stripe, uye Etsy.
ne inFlow manejimendi manejimendi, iwe uchave kukwanisa kutonga ako ese zvigadzirwa munzvimbo imwechete. Kunyangwe iwe uri kutenga, kutengesa, kana kufambisa, iyo inFlow software inogona kubatsira iwe kuitevera.
Kubva pane zvigadzirwa kusvika pamitengo uye masheya emasheya, inFlow inoita kuti iwe ubate zvese kubva pane zvese zvekushandisa.
Iyo software inogona kufananidzwa nebhizinesi rekuchenjera sevhisi. Sewe muridzi webhizinesi, iwe uchagara uchiziva izvo zvigadzirwa zviri muhomwe, ndeapi zvinhu akachengetwa, uye ndeapi zvigadzirwa zvakarairwa.
Iko kuoma kweiyo inFlow's system kunoreva kuraira kwakakura kana kunonoka kwekutakura hakuzobate iwe pasina chenjedzo uye kukonzera bhoteni mukuita kwako.
Mazita makuru senge AT&T, NASA, Volvo, 7-Gumi neimwe, uye Panera ese akashandisa muFlow yekutarisa kweyekutengesa.
Iwe unozogona kuwona nhoroondo yeiyo yega chigadzirwa. Chinhu chakafanana neFIFO neLIFO chinobva chaverengera kuwerengerwawo.
inFlow inventory management inowanzo shandisirwa dzimba dzekugadzira, kugadzira, kutengesa, kutengesa zvinhu, uye basa saiti manejimendi.
Heano ipfupi kutarisisa kwe software zvirongwa uye mitengo:
Chiedza - $ 71 pamwedzi inobhadharwa pagore ($ 79 mwedzi-kusvika-mwedzi)
2 nhengo dzechikwata
Kusvikira zana mairairo pamwedzi
Standard - $ 179 pamwedzi inobhadharwa pagore ($ 199 mwedzi-kusvika-mwedzi)
5 nhengo dzechikwata
Nzvimbo dzisina kuyerwa
Kodzero dzevashandisi yekushandisa
B2B yekuratidzira portal
Uyezve - $ 359 pamwedzi inobhadharwa pagore ($ 399 mwedzi-kusvika-mwedzi)
10 nhengo dzechikwata
Kusvikira zviuru zvinodaira
Iko kune sarudzo dzekuwedzera-dzinowanikwa kune zvinhu sebhiri rezvinhu uye vashandi. Iwe unogona kuedza chero chipi zvacho chemapurani aya kwemazuva gumi nemana.
Kusunungurwa inopa indasitiri-yakatarwa yekutanga software software yeanotevera mabhizinesi marudzi:
Iyo yakanaka mhinduro kune vagadziri uye avo iwe unotengesa zvigadzirwa kuburikidza neB2B ecommerce webhusaiti.
Iwe unogona kushandisa iyi yekutsvaga management solution kuti iite otomatiki yako yose B2B kutengesa maitiro. Iyo yakagadziridzwa maitiro inoita kuti zvive nyore kwauri kuzadzisa mareti ekutengesa nemazvo uye nemazvo.
Tonga zvese zvaunoda zvakananga kubva kuUsuashed Sales mobile app.
Isina kusangana inobatanidza nemabhizimusi akakurumbira mhinduro seShopify, Xero, QuickBooks, Amazon, Zapier, nezvimwe.
Yakaringana yekutsvaga tracking ndeye yakakosha standout yeiyo Unleashed software. Iwe uchawana chaiyo-yenguva mhedzisiro kuwedzera kune simba analytics yekutengesa, kugovera, uye kutengesa nzira nzira.
Heano matengo emitengo yeUsingaenzanisirwe maitiro ekutonga:
Pakati - $ 259 pamwedzi inobhadharwa pagore ($ 279 mwedzi-kusvika-mwedzi)
Yakakura - $ 499 pamwedzi inobhadharwa pagore ($ 549 mwedzi-kusvika-mwedzi)
Yakakura Plus - $ 819 pamwedzi inobhadharwa pagore ($ 899 mwedzi-kusvika-mwedzi)
Misiyano iripo pakati pezvirongwa inonyanya kubva pahuwandu hwevashandisi vauinavo. Zvese zvirongwa zvinouya nezvisina zvigadzirwa, vatengi, vanopa zvinhu, vanochinja, vanobatanidza, uye zvigadzirwa.
Final Inventory mhinduro yepakati pebhizimusi rako diki. Software racho rine rakawanda siyana maturusi, maitiro, uye zvakanaka, kusanganisira:
Wireless barcode kuongorora
Kuzivisa zvine simba
Kutenga uye kuzadza zvakare
Kitting nemasumbu e ecommerce
Finale Inventory ine zvirongwa zvishanu zvakasiyana zvekugonesa izvo zvinodikanwa zvese zvebhizimusi saizi. Ose anouya nerakawanda-nzvimbo rutsigiro, zvinosvika zviuru zana zvinhu, zvekutungamira manejimendi, uye kurongeka kwemaneja.
Ndarira - $ 99 pamwedzi (kana $ 999 pagore)
Zvakanakira bhizinesi diki
Zviuru zvezviuru pamwedzi
Siliva - € 275 $ pamwedzi (kana $ 2,750 pagore)
Goridhe - $ 449 pamwedzi (kana $ 4,490 pagore)
Zvakanakira barcoding zvinodiwa
4 barcoding marezinesi
Platinum â €
8 barcoding marezinesi
Tsika â € ”Tsika yemitengo
Best kune yakakwira vhoriyamu uye Fortune 500
Kusvikira kuvashandisi ve300
1.5 miriyoni zvinhu
Chibvumirano chebasa reTenzi
Yepamberi yekuchengetedza macomputer
Bata Finale Inventory kukumbira demo uye yemahara muedzo.
Ungasarudza Sei Yakanakisisa Inventory Management Software Kune Bhizinesi Rako
Ndeipi yakanakisa yekutanga software software yebhizinesi rako? Mhinduro yacho ichave yakasiyana kune wese munhu. Iyi ndiyo nzira yatinokurudzira kurudzira sarudzo dzako.
Manual yekufungidzira manejimendi yakapera nguva. Kunyangwe iwe uchishandisa software, iwe unoda kuve nechokwadi kuti huwandu hwemaitiro ako hwakagadzirwa.
Imwe neimwe nguva chidimbu cheyisitori chichitengeswa, kudzoserwa, kana kusimuka kubva pane imwe nzvimbo ichienda kune imwe, system yacho inofanira kungozvigadziridza. Inventory otomatiki zvakare inozobatsira kunatsiridza iko kwechokwadi kwekutengesa kwako kwesitoko.
Izvo zvekutarisira manejimendi nemaitiro ezvekushandisa hazvibatsiri kana uchiri kuda kupedzisa mabasa emaoko kumwe kunhu.
Tarisa uone yekutsvaga software yekubatanidza iyo inosanganisa pamwe nezvimwe zvekushandisa zvauri kushandisa kare. Ini ndiri kureva zvinhu zvakaita se accounting software, ecommerce platforms, uye CRM.
Iyo yakanakisa yekutanga software software pamusika nhasi ine zvakasiyana siyana. Mamwe ekukwirira kuchengeta ziso pane anosanganisira:
Inventory inodhura (LIFO, FIFO, nezvimwewo)
Zvichienderana nemamiriro ako akasarudzika, unogona kana ungangoda zvimwe kana zvese zveizvi chimiro.
Mamwe software anoitirwa mamwe marudzi emabhizinesi nemaindasitiri. Semuenzaniso, vagadziri uye vatengesi vane zvinhu zvakasiyana zvekutsvaga pane vashoma vatengesi.
A B2B ecommerce webhusaiti yaizove nezvinodiwa zvakasiyana pane yetsika B2C ecommerce mashandiro. Saka tsvaga software inoshanda mune rako bhizinesi mhando uye indasitiri, kana zvichikwanisika.
Mutengo wekutsvaga maneja software unosiyana zvishoma. Takaongorora mhinduro dzakasununguka kana kutanga pa $ 39 pamwedzi. Dzimwe sarudzo pane yedu zvinyorwa dzinodarika $ 1,100 pamwedzi.
Vazhinji vako vangangodonha pane imwe nzvimbo pakati pezvakanyanya izvi. Mitengo inowanzosiyana zvichienderana nehunhu, vashandisi, uye huwandu.
Nezvakawanda zvekutsvaga zvigadziriso zvigadziriso zvekufunga nezvazvo, pane zvisere chete zvisarudzo zvandinogona kuita nekurudzira. Heano yambiro zvekare kune yatakatarisisa pamusoro apa:
Cin7 â €
Samaki â €
Ordoro â € BestMhando yepamusoro yekutungamira yekutengesa ezvekutengesa zvitoro.
Veeqo â €
Zoho Inventory â €
inFlow â € ”Zvakanakisisa zvekutungamira software software yebhizinesi diki.
Kusunungurwa â €
Final Inventory â € ”Best gore-yakavakirwa yakakwirira-vhoriyamu hesita management.
Kubva kune vashoma mabhizinesi ekutengesa kune yakakwirira-vhoriyamu vanoigovera, pane sarudzo kune yega bhizinesi pane iyi runyorwa.
Iyo yakanakisa Bhizinesi process Management Software
Yakanakisa Diki Bhizinesi Yekubvunzana Software
Yekupedzisira Nongedzo kune Ecommerce
Yakanakisa Pepa yekutengesa (POS) Systems